di na nwunye | Otu Di na Nwunye
June 15, 2017 + Arts & Music, Di na Nwunye, Florida, North America, Nhazi njem, United States
Best Fort Lauderdale ehihie na abalị maka niile ego
Mgbe anyị na-eche banyere mmekọrịta nwoke na nwaanyị, anyị na-ekwenyekarị na "ogologo njem na osimiri," ma ọ bụ ọnọdụ ọzọ dị egwu na ihu igwe ọkụ na nkwụ na-agagharị. Nke a bụ otu akụkụ nke South Florida, na ihe mere Fort Lauderdale ji bụrụ nnukwu njem maka di na nwunye. Igwe mara mma nke na-adighi mma, oge ehihie, na onodu agwaetiti-na-eche na o buru ibu ... GỤKWUO
Mee 23, 2017 + Di na Nwunye, Eme njem, Nhazi njem
Atụmatụ ego kachasị elu nke 10 maka njem di na nwunye
Otu n'ime ihe ndị na-egbochi anyị ịga njem na mbụ na mmekọrịta anyị bụ nghọta na anyị agaghị enwe ike ịhụ ụwa. Njem dị ka ihe echere ma ọ bụrụ na ọgaranya ma ọ bụ ndị na-enweghị ọrụ na enweghị oge, ụdị nwere ike njem ọnụ ala n'ihi na ha nwere oge iji bọs ma ọ bụ azụ azụ kama ịzụta ụgbọ elu site n'otu ebe ... GỤKWUO
January 24, 2017 + Di na Nwunye, Florida, Nri na ihe ọṅụṅụ, North America, United States
Ebee ka Di na Nwunye Na-abanye na Fort Lauderdale?
Anyị nwere ọganihu iji biri na ebe, ọbụna mgbe anyị na-anọghị n'okporo ụzọ, na-enwe mmetụta dịka ezumike. Mụ na Tracy kwagara Fort Lauderdale afọ ole na ole gara aga, ọ dịkwalarị mgbe ọhụụ nke ihe dị mkpa ga-eme na Venice nke America, dịka a kpọrọ ya. Fort Lauderdale abughi obodo buru ibu, ebe ndi mmadu bi na 200,000 bi na ... GỤKWUO